ဘောနပ်စ် စကားပြောရန် 15 ဘတ်
နိုင်ငံခြားသို့ ခေါ်ဆိုရန် 1ဘတ်/မိနစ်
အကန့်အသတ်မဲ့ အခမဲ့ WiFi 24နာရီ
24နာရီ အကန့်အသတ်မဲ့ ဆိုရှယ် အပလီကေးရှင်း 14မျိုး
အကန့်အသတ်မဲ့ 14 ဆိုရှယ် အပလီကေးရှင်း
အကန့်အသတ်မဲ့ WiFi 8ရက်
299ဘတ် 8 ရက်
ဘောနပ်စ် စကားပြောရန် 100 ဘတ် ထရူးနံပါတ်ကို
နိုင်ငံခြားသို့ ခေါ်ဆိုရန် စတငျ 1ဘတ်/မိနစ် မှတဆငျ့ 00600
ဘောနပ်စ် 15GB ကို
အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်းဖြင့် မရပ်တမ်း အင်တာနက်မှ ပိုသုံးလျှင်
သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏထက် ပိုသုံးလျှင်
အကန့်အသတ်မဲ့ အခမဲ့ WiFi
599ဘတ် 15 ရက်
ဘောနပ်စ် စကားပြောရန် 50 ဘတ် စကားပြောရန်
ဘောနပ်စ် 30GB ကို
15 ရက် အကန့်အသတ်မဲ့ ဆိုရှယ် အပလီကေးရှင်း 14မျိုး (ထို့အတွက် ဒေတာ ကျသင့်ခြင်းမရှိပါ)
အကောင်းဆုံး မြန်မာနိုင်ငံကို ခေါ်ဆိုရန်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားကို ခေါ်ဆိုရန် ဖုန်းခေါ်ဆိုနှုန်း
00600ဖြင့်ဖုန်းခေါ်အထူးနှုန်းး MPT 1.5 ဘတ်/မိနစ်
အခြားနံပါတ်ခေါ်3ဘတ်/မိနစ်
(29ဘတ် သက်တမ်း 30ရက်)
00600 ဖြင့်ဖုန်းခေါ် အထူးနှုန်း ကွန်ယက်တိုင်း 2.5ဘတ်/မိနစ်
နှင့် အင်တာနက် 500MB
(7ဘတ် သက်တမ်း 7ရက်)
Truemove H 1ဘတ် / တစ်နာရီ
အခြားကွန်ယက် 1ဘတ် / မိနစ်
ဘောနပ်စ် 2GB သက်တမ်း 7ရက်
နောက်ထပ် ခံစားခွင့် အခမဲ့ YouTube 7ရက်
ငွေဖြည့် ဘောနပ်စ် ဖုန်းငွေပြည့်အောင်ဖြည့်ပြီး
ငွေ 50ဘတ် ဖြည့်
မြန်မာဆင်းမ်အတွက် အပိုဆောင်း ပက်ကေ့ခ်ျများ
00600ဖြင့် ဖုန်းခေါ် အထူးနှုန်း ကွန်ယက်တိုင်း
ကမ္ဘောဒီးယားဆင်းမ်အတွက် အပိုဆောင်း ပက်ကေ့ခ်ျများ
Suvarnabhumi လေဆိပ် - နှစ်လွှာက Arrival Terminal, ဂိတ် 5
Don Mueang လေဆိပ် - Arrival အထပ်၊ , ဂိတ် 3,5
Phuket လေဆိပ် - Terminal 2, ဂိတ် 3
Chiang Mai လေဆိပ်, ဂိတ် 1,2
Chiang Rai လေဆိပ်
Hat Yai လေဆိပ်
Samui လေဆိပ် - Arrival Hall, ပထမထပ်
Krabi လေဆိပ် - Arrival Hall, ပထမထပ်
U-Tapao လေဆိပ် - Terminal 2
BTS skytrain နဲ့ MRT train stations တွေနားက ထရူးဆိုင်များ
BTS Siam ဂိတ် 2- True Shop Digital Gateway
BTS Chit Lom ဂိတ် 1,2- True Shop Central World, 4လွှာ
BTS Ploen Chit ဂိတ်5- True Shop Central Embassy, 4လွှာ
BTS Asoke ဂိတ် 1,3 - True Shop Terminal 21, 6လွှာ
BTS Phrom Phong ဂိတ် 1 - True Shop Emquartier, 3လွှာ, Building A
MRT Rama9ဂိတ်2- Central Rama 9
ထရူးဆိုင်၊ 7-Eleven နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ ထရူးမိတ်ဖက် ဆိုင်
ဆင်းမ်ကဒ် စတင်သုံးစွဲဖို့ လုပ်ဆောင်မလဲ
1. Insert ဆင်းမ်ကဒ်ကို သင့်ဖုန်းဟန်းဆက်ထဲ ထည့်သွင်းပါ
2. Dial *123#ကိုနှိပ်၍ခေါ်ပြီး လက်ကျန်ငွေစစ်ပါ
3. Call အခုသင်ဆက်သွယ်လိုတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်လို့ရပါပြီ
ပြည်တွင်း၌ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်မယ်
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လိုင်းဖုန်း နံပါတ်တွေကို ဖုန်းခေါ်မယ်
နယ်မြေကုဒ် + သင်ခေါ်ဆိုလိုတဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ကိုခေါ်ပါ
ဥပမာ- ဘန်ကောက်ရဲ့ နယ်မြေကုဒ်ဟာ 02 ဖြစ်ပါတယ်
ဖုန်းခေါ်ဆိုနှုန်းမှာ $0.03 (1 ဘတ်)/မိနစ်သာကျသင့်ပါတယ်
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ဟန်းဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဖုန်းခေါ်မယ်
သင်ခေါ်ဆိုလိုတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို အလွယ်တကူ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်
ဖုန်းနံပါတ် အစနံပါတ်ဟာ 08x - xxx - xxxx သို့မဟုတ် 09x-xxx-xxxx နဲ့စတတ်ပါတယ်
ကြိုက်ရာ ဟန်းဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုနှုန်းမှာ $0.03 (1 ဘတ်)/မိနစ်သာကျသင့်ပါတယ်*
ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ နှုန်းထားနဲ့ 00600 မှတစ်ဆင့် ခေါ်ဆိုရန် $0.03 (1 ဘတ်)/မိနစ်* နှုန်းမှ စတင်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံ 230သို့ အသက်သာဆုံး ဈေးနှုန်းနဲ့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်
ပထမတန်းစား အရည်အသွေးနဲ့ ချွေတာရေး ဈေးနှုန်းဖြင့် 006 မှတစ်ဆင့် ခေါ်ဆိုရန် $0.08 (2.5 ဘတ်)/မိနစ်* နှုန်းမှ စတင်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံ 230သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
*ဈေးနှုန်းမှာ ခေါ်ဆိုလိုတဲ့ နိုင်ငံပေါ်မှုတည်ပြီး ကွာခြားပါသည်၊ ငွေလဲနှုန်းကို $1 = 30 ဘတ် နှုန်းဖြင့် တွက်ထားပါသည် (အခွန် 7% VAT မပါဝင်သေးပါ)
နိုင်ငံခြားဖုန်းနံပါတ်ကို SMS ပို့နည်း
နိုင်ငံပေါင်း 230 ထက်ပိုများတဲ့ နိုင်ငံတွေကို မက်ဆေ့ခ်ျပို့နိုင်တယ် $0.16 (5 ဘတ်)/မက်ဆေ့ခ်ျ သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပါတယ် (အခွန် 7% VAT မပါဝင်သေးပါ)
(*မက်ဆေ့ခ်ျ အဝင် (မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိခြင်း) အတွက်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်)
သင့်ဟန်းဆက်တွင် WiFi ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပါ (Enable Wifi)
".@ TRUEWIFI" သို့မဟုတ် ".@ TrueMove H" ကို သင့်ဟန်းဆက်တွင်မြင်နေရသည့် ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ WiFi ကွန်ယက်များ စာရင်းမှရွေးချယ်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင် သင်သုံးနေကြ browser ကိုသွားပါ
ပေးထားတဲ့ username နဲ့ password ကိုသုံးပြီး Sign In လုပ်ပါ
ပြီးရင် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ။ True WiFi ကိုခံစားနိုင်ပါပြီ
ထရူးဆိုင်နှင့် 7-Eleven အရောင်းဝန်ထမ်းကို သင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဖြည့်လိုတဲ့ ပမာဏကို ပြောပြီး ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်
ထရူး မန်းနီး ငွေကဒ် သင့်မှာ စလစ်အပျော့ သို့မဟုတ် ထရူးမန်းနီး ငွေဖြည့်ကဒ်ရှိတယ်ဆိုရင်
*123* ပင်နံပါတ်14လုံး# ကိုနှိပ်၍ ခေါ်ပြီး ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်
အကြွေးဝယ်ကဒ် ချက်ချင်း ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်
အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်များ (အခမဲ့ ခေါ်)
Tourist Police Call Center အတွက် 1155 ကိုခေါ်ပါ
Thailand Tourism Information Call Center အတွက်
ဆေး/ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်နံပါတ် အတွက်
AOT Call Center/ Airport Immigration အတွက်
Immigration Bureau အတွက်
ထရူးမုဖ် အိတ်ခ်ျ ဝန်ဆောင်မှု ဌာနအတွက်
ဝန်ဆောင်မှု နံပါတ်များ (အခမဲ့)
လက်ကျန် Data စစ်ရန်
ထရူးမုဖ် အိတ်ခ်ျ ကဲ အတွက်
1242 (3฿ တစ်ခါခေါ်လျှင်ကျသင့်ပါမယ်၊ အခွန် 7% VAT မပါသေးပါ)
*တစ်ရက်တွင် ပထမဆုံးခေါ်ဆိုခြင်းအတွက် အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊ ထို့နောက်ထပ်ခေါ်တဲ့ ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် $0.03 (0.9 ဘတ်) တစ်ခါခေါ်လျှင်ကျသင့်ပါမယ်၊ အခွန် 7% VAT မပါသေးပါ